Fanaanka Maxamed Axmed Khoomaal oo maxkamad London ku taal dembi ku heshay | Somaliska
Fanaanka Maxamed Axmed Khoomaal oo maxkamad London ku taal dembi ku heshay
Fanaanka soomaaliyeed ee caanka ah Maxamed Axmed Khoomaal, ayaa maxkamad ku taala magaaladda London waxaa ay ku heshay dembi ah inuu wax is dabasiiyey, ka dib markii isagoo aan dalka joogin muddo saddex sanno ah qaadanayey lacagta kaalmada ah ee la siiyo ee ceeyrta loo yaqaano.
Mid ka mid ah wargeeysyadda dalkaasi ka soo baxa ee la yiraahdo Mirror oo arrintan wax ka qoray ayaa sheegay in fanaankan uu sanad walba qaadan jiray lacag gaareeysa 39 kun oo gani istarliinka ah isagoo aan xaadir ku aheyn dalka Ingiriiska. Fannaan Qoomaal oo da’diisa ay saxaafadda dalkaasi ku sheegtay inuu 72 jir yahay ayaa Ingiriiska iskaga tagay sanadkii 2013-kii oo muddo saddex sanno ah ku maqnaa dalka Soomaaliya, islamarkaasina aannu wargelin dowladda in laga joojiyo lacagta ceyrta ah ee uu qaato.
Dhinca kale fannaankan ayaa gurigii ay dowladda siisay waxaa uu ka kireeyey nin la sheegay in uu saaxiibkii ahaa. Ugu dambeyntiina fannaankan oo maxkamadda . horteeda ka qirtay qaladkaasi uu galay ayaa weydiistay cafis, hase ahaatee waxaa lugu xukumay 15 bbilood oo xarrig ah.
Bashir Aman oo Sweden ka aasaasaya bank Islaami ah